တရုတ်နိုင်ငံမှအရည်အသွေးမြင့်2Li -ion 18650 Battery Holder အား Lead Wires များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
Lead Wires နှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး
Lead Wires ပါသော Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder ၂ လုံးသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျနှင့်ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဝါယာကြိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤ2Li-ion 18650 Battery Holder သည် Lead Wires ပါ ၀ င်သော 7.4V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Lead Wires နှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
Lead Wires ပါသော Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံးသည် 3.7V ဘက်ထရီနှစ်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ ဘက်ထရီသည် ၇.၄ V ဗို့အားကိုထုတ်နိုင်ပြီးဤကိုင်ဆောင်သူအား laptop၊ မီတာများ၊ ကြိုးမဲ့ walkie-walkie, စတီရီယိုပစ္စည်းများ၊ မော်ဒယ်လေယာဉ်ပျံ၊ ကစားစရာများ၊ ဗွီဒီယိုကင်မရာစသည်တို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ Keyu အမှတ်တံဆိပ်2Li-ion 18650 Battery Holder နှင့် Lead Wires များကို ၁၀၀% ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Lead Wires ၂ လုံးပါ Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး၏ Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် Lead Wires နှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး
၃။ ဓာတ်ကြိုးနှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး၏ Product Feature နှင့် Application
1. ဤ2Li-ion 18650 Battery Holder ကို Lead Wires ဖြင့် 7.4V ဘက်ထရီအထွက်သို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်
Lead Wires နှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး၏ ၄ ပုံအသေးစိတ်
Lead Wires အသေးစိတ်ပါသော Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder ၂ လုံး
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Lead Wires with Li-ion 18650 Battery Holder2လုံး
၅။ Lead Wires နှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံး၏ Product Qualification
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ Li-ion 18650 Battery Holder ၂ ခုစလုံး။
၆။ Lii-ion 18650 Battery Holder ၂ လုံးကိုထုပ်ပိုးပြီးပို့ဆောင်ပါ
Lead Wires ၂ လုံးပါ Li-ion 18650 Battery Holder ၏ ၇. အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Lead Wires ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ၂ နှစ်တာ Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder တွင်ရှိနေပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုများစွာနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများသင် Lead Wires များနှင့်2Li-ion 18650 Battery Holder အတွက်အခမဲ့နမူနာများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
hot Tags:: Lead Wires များပါ ၀ င်သော Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder ၂ လုံး၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်ယူ၊ စိတ်ကြိုက် စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်၊ CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအားကောင်း၊ အဆင့်မြင့်